MAQAALO – Shacabka News
Author Mohamed YarePosted on 01/01/2018 Categories MAQAALO, WARARKA MAANTALeave a comment on Weerarkii Guriga Senator Qeybdiid oo Su’aalo badan keenay, Yaa Adeegsaday Ciidamada.???
Author Mohamed YarePosted on 22/12/2017 Categories MAQAALO, WARARKA MAANTALeave a comment on Dacwadii Daciifka ahayd ee Xeer Illaalinta u cuskatay C/raxmaan C/shakuur Warsame – (Qodobada).
Kenya oo Wada-hadal ku Adkeysanaysa Muranka Badda, Akhriso Sooyaalka Murankaasi.
Dawladda Kenya ayaa todobaadkan ka jawaabtay kiiska dacwad badeedka ay Soomaaliya hor-dhigtay maxkamadda, iyada oo qoraal u dirtay maxkamadda cadliga adduunka ee Hague, Netherlands.
Dacwada ayaa ku saabsan in la xadeeyo badda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya ee badweynta Hindiya, iyada oo la oogay 28 August 2014.
Soomaaliya waxay rabtaa Kiiskan in xadka noqdo “Equidistant line” oo masaafo simman loo jirsado halka Kenya ay rabto (along a parallel of latitude) ama khad balac ah taas oo ay leeyihiin waxaa ay ku soo baxday Dekereeto madaxweyne markii ugu horeysay 1979 iyo mar kale 2005.
”Iyada oo Kenya xushmeyneysa kaalinta muhiimka ah ee maxkamadda cadliga adduunka ee xalinta murannada iyo horumarinta nabadda hadana Kenya waxaa ay rumeysan tahay in uu yahay xalka keliya ee muranka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya”
Sidaasi waxaa yiri xeer-ilaaliyaha Kenya Githu Muigai.
Soomaaliya ayaa ka carrootay heshiisyada dalka Kenya iyo shirkadaha shidaalka la gashay ee baddeena lagu baaryo, waxaa ay dacwad u gudbisay Maxkamadda Cadliga Aduunka, labada dal ayaa isla gartay in koox weliba ay dacwadeeda hor-dhigto qareennada maxkamadda cadliga adduunka.
Soomaaliya ujeedadeeda waa in la xadeeyo badda iyo dhulka ku dhaw halka Kenya ay dooneyso in ay samayo xariiqin badda ah.
1989: Labada Dal, waa Kenya iyo Soomaaliya e, waxaa ay saxiixeen heshiiska badda ee qaramada Midoobey, heshiiskan caalamiga ee badaha waxaa la sameeyay 1982.
Is afgaradkan oo ay saxiixeen wasiirka qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdiashur iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Moses Wetang’ula ayaa waxaa lagu sheegay in labada dal ogolaadeen xadeynta cabbirka qalfoofta qaaradda ee badweynta ka xiga fogaan ka durugsan 200 oo Meyl badeed oo u dhiganta( (370km), oo weliba u gudbniyaan guddiga xadeynta iyo in la calaamadeeyo si rasmi ah biyaha lagu muran san yahay ee Badweynta ka xiga fogaan ka durugsan 200 oo Meyl badeed-u dhiganta-( (370km) ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya iyadoo la raacayo sida ku qoran qawaaniinta caalamiga ah ee qaramada midoobey.
Heshiiskaas oo hadda taariikhda galay, waxaa qeylo-dhaan ka keenay shacabka Soomaaliyeed oo badankood ku doodeen in baddii Soomaaliya La iibsaday.
October 8, 2011: Baarlamaankii KMG ahaa ee Soomaaliya ayaa fadhi ka yeeshay arrinta heshiiska badda, kulanka waxaa shir guddiiminayey Mudane Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo ahaa ku simmaha afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya, kulanka waxaa soo xaadiray ilaa 335 mudane, waxaana Laga soo saaray ilaa 6 qodob.
In lagu dhaqmo sharciga badda Soomaaliya ee soo baxay 1988.
Cid walba oo ku xadgudubta waxaa la sheegay in ay galeyso khiyaammo qaran.
August 28, 2014: Dowladda Soomaaliya ayaa dacwad ka dhan dalka Kenya, kuna saabsan muranka badda u gudbisay Maxkamadda Cadliga Aduunka ee hoos tagta Qaramada Midoobey si loo xadeeyo badda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya.
Xeer Ilaaliyaha Kenya waxaa uu ku taliyay in howsha Wada hadal hoose lagu dhameeyo inta labada dal ay maxkamadaha isku jiijiidi lahaayeen, isagoo intaa raaciyay in Soomaalida aanay iloobin in ciidamo nabad ilaalin oo Kenyaan ah ay ka joogaan Soomaaliya iyo in Qaxooti ka badan Nus Milyan oo Soomaali ah in ay joogaan gudaha dalka Kenya.
October 10, 2015: Dr. Axmed Cali Daahir oo Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ee Soomaaliya oo qiray in uu jiro codsiga Kenya ayaa sheegay in qoraal codsi hor-u-rdhac ah oo dowladda Kenya u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ, taasi oo ku aadan wada hadal hoose in lagu dhameeyo muran badeedka kala dhaxeeya Soomaaliya.
September 2016: Waxaa Hague ka bilowday dhageysiga dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya, waxaana ugu dambeyntii la aqbalay in maxkamadda cadliga adduunka ay qaadi-karto dacwada.
December 18, 2017: Kenya oo ka jawaabaysa kiiska iyada ayaa sheegtay in ay qabaan in wada hadal wax lagu dhameeyo.
International Court of Justice (ICJ) Waxaa la dhisay 1945-tii, waxayna ugu duwantahay Maxkamadda Dambiyada Dagaalka.
Maxkamaddan waa hey’ad garsoor oo Qaramada Midoobay hoostimaado, xarunteedu waxaa ay ku taal Den Haad oo ah magaalo ku taalo galbeedka dalka Holland, waxay ay fiirisaa ama dhageysataa eedaha iyo codsiyada ay soo gudbiyaan dowladaha xubnaha ka ah.
Author Mohamed YarePosted on 20/12/2017 20/12/2017 Categories MAQAALO, WARARKA CALAMKA, WARARKA MAANTALeave a comment on Kenya oo Wada-hadal ku Adkeysanaysa Muranka Badda, Akhriso Sooyaalka Murankaasi.
Author Mohamed YarePosted on 20/12/2017 Categories MAQAALO, WARARKA MAANTALeave a comment on Caqabadaha Sharci ee Xeer Illaalinta horyaal kadib weerarkii lagu xiray C/raxmaan C/shakuur Warsame
Author Mohamed YarePosted on 19/12/2017 20/12/2017 Categories MAQAALO, WARARKA MAANTALeave a comment on Xariga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Soomaaliyada Cusub.!!! (FAALLO).
Hadalkii Donald Trump: War waa kheyre daaya.
Habeenkii ay taariikhdu ahayd 6dii bisha December 2017 markay saacadda geeska Africa ahayd sagaalkii habeenimo (21:00 PM ) ayuu Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ku dhawaaqay in dawladda Maraykanku u aqoonsatay Magaalada Barakeysan ee Qudus Caasimada Dawlada khasabka ku haysata dhulka falastiin ee Israel, Wuxuu intaa raaciyay in Safaaradda maraykanka loo raro magaaladda Qudus.
Trump wuxuu cuskaday goáan soo baxay 1995 ee uu soo saaray Congresska maraykanka. Cajiib! Oo Qudus goormuu Maraykan yeeshay? Waxaa taa ka sii daran, Trump wuxuu ku andacooday in talaabadani horay u wadi doonto geedi socodka nabada ee bariga dhexe.
Waa cajiib in qofkasta oo sheegta diinta Yuhuudu uu xaq u leeyahay dhulka Falastiin. Taasi waxay la mid tahay anoo sheegtay magaalad barakaysan ee Maka, anoo daliishanaya in aan Muslim ahay.
Donald Trump muxuu ka helayaa bixinta Qudus?
Sida dadka ku xeel dheer arimaha siyaasadda , in badan oo ka mid ah, ay isku raaceen wax dana oo ugu jirta talaabadan dalka maraykanka ma jirto, Taa lidkeeda , khasaaro ayaa ugu jirta talaabdan khaldan.
Waxaa waxa lagu qosla ahayd in Trump yiri:
“Talaabadani waxay horseedaysaa in nabad waarta ka dhalato Dhulka Falastiin”
oo sidee uga dhalan kartaa , dhulkii laysku haystay haddaad Israel u aqoonsatay inay leeyihiin?
Ma fududaanayso in dadka reer falastiin lagu qanciyo in si nabada dhulka Falastin lagu soo dhiciyo, Qoraxda sideeda ayay u muuqataa in Israel ku socoto inay hesho dhul ka badan kan Falastiin oo aysan intaa ku joogsanayn. Maraykana intii u aragtay inuu wax dhex dhexaadinayo waa “Ishii buktaay ku bikaacso”
Shucuubta muslimiinta iyo carabta Masiixiyinta ah waxaa la gudboon, ugu horayn in la garto in Maraykanka iyo Yuhuudu aanay ku dhiiran karin arin noocan oo kale ah , haddii aysan haysan xukuumadaha sharci darrada ee carabta oo runtii ah caddawga ay ummadaha leedahay.
Inta ay joogaana aan rajo laga qabi karin xornimo iyo Sharaf.
Markaa waa in dagaalka lagu bilaabo iyaga, Waa tan saddexaade in ay shucuubtu midoowdo arintaana ay shucuubtu khasbaan.
Ugu dambayna, in aysan marna joojin isu soo baxa looga hortagayo dulmiga aan xadka lahayn ee uu Trump horseeday oo haddii aan falcelis adag laga samayn, lagana noqon, noqonaysa tallabo horseedda in Madina Munwara iyana la bixiyo, madaxda Sucuudigana ka durkaan dadkii reer khaybar oo guryahoodii ku soo nqonaya.
Waxaa qoray: Xuseen
Qoraalkan waxa uu ka tarjumayaa aragtida qoraha, looma fasiran karo tan Shacabka News.
This post reflects the opinions of the author and not necessarily those of Shacabka News as a publication.
Author Mohamed YarePosted on 16/12/2017 16/12/2017 Categories MAQAALO, WARARKA CALAMKALeave a comment on Hadalkii Donald Trump: War waa kheyre daaya.
XASAASI: Mahad Salaad oo Fashiliyay in Shirkado Shisheeye ay qoranayaan Maleeshiyo beeleedyo & Calooshood ushaqeystayaal dilalka fuliya.
Author Mohamed YarePosted on 15/12/2017 Categories MAQAALO, WARARKA MAANTALeave a comment on XASAASI: Mahad Salaad oo Fashiliyay in Shirkado Shisheeye ay qoranayaan Maleeshiyo beeleedyo & Calooshood ushaqeystayaal dilalka fuliya.
Xalkii Loo Helay Muranka Dakadda Boosaaso iyo Mustaqbalka – (MAQAAL).
Waxaa si weyn loo soo dhaweeyey heshiiskii ay Isimada Puntland ka gaareen murankii xanibey habsami socodka dakadda Boosaaso kadib heshiiskii P&O, dad badan oo aan ka mid ahay aniga qoraaga ah ayaa si weyn ugu farxay in dakaddu mar labaad si caadi ah dib u hawlgasho.
Waxay isimadu muujiyeen in ay iyagu yihiin marjaca ugu danbeeya ee furdaamiya markasta oo xaaladi cakiranto.
Qofkasta oo fahamsan nuxurka iyo muga macanaha Dowlad ma jecleysaneyo inuu arko xoogag kale oo si lasiman awood mug leh ku leh aayo katalinta waddanka oo misna ka madax banaan dowlada markaa hogaanka wadanka heysa, waxaase is weydiin mudan waa noocee dowlada Puntland?.
Dowladda Puntland waa mid iyadu katimi hogaanka dhaqanka oo aanan ku iman rabitaanka shacabka (hal qof iyo cod), sida darteed waxa la dhihi karaa hoggaanka dhaqanka Puntland waa aabaha dowlada Puntland, markaas doorkodu waa mid marwalba taagan.
Maxaa La gudboon Dowlada Puntland?
Muranka dekadda iyo soo dhexgalka isimada waxay aad u muujisay kalsooni xumida shacabku ku qabo dowlada Puntland, sidoo kale waxay banaanka keentay karti la’anta, hufnaan la’aanta iyo khidad xumida dowlada.
Sida awgeed waxaa lagudboon iminka in wixii sixid u baahan ay dowladu latimaado qorshe lagu hagaajinaayo oo lagus axaayo, wixii hadda kadanbeyana aysan mala awaaleyn, afmisharayn arimaha masiirka u ah aayaha ummada.
Waa in ay fahmto waddankani inuu leeyahay dad iyaga khibrad, garaad iyo aqoonba dheer oo waxkasta ka jecel horumar Puntland.
Waxaa maamulka Cabdiweli Cali Gaas aad loogu amaanay mashruuci ugu weynaa ee kadib qaran jabkii Soomaaliya laga fuliyo oo ahaa dhismihii garoonka diyaaradaha, waddada Ceel Dahir iyo bilowgii gegida diyaradaha Garowe oo hadey dhamaato noqon doonta midda ugu muhiimsan wadanka Soomaliya.
Balse intaas oo horumara oo ay ku tilabsatay waxaa daah ku rogay musuqmaasuq si qaaawan banaanka uyimid sanadahan danbe.
Madaxda ugu sareysa waddanka ayaa hormuud kanoqday ku takrifalka dhaqalaha yar iyo raasimalka wadanka.
Markasta oo dadku ka muujiyaan dareen sida wax u socdaan, xalku maamulka Puntland la yimaadaa waxa uu noqdaa Agasimayaal la magacaabo, ama degmooyin qaab qabiil loo magacabo oo qeybi oo xukun kudhisan iyo safaro dibadaha lagu kala bixiyo oo macno ahaan aan dhaafsiisaneen igu sawir (photo opportunity) lahayn.
Maxaa la gudboon Ganacsata Puntland?
Kan hore (investor) waa maalgashade wuxuu hantidiisa geliyay waddanka, wuxuu abuuray shaqo iyo wax soo saar.
Wadankasta waxaa jira sharciyo khaas ah oo maalgashadaha hantidiisa lagu ilaaliyo; sida isagoo cashuur dhaaf loo sameeyo, dowlada oo wax ka amaahata ama amaahiya, madaxda waddanka oo uu ur aaco waddamada xiiriirka ganacisya lala yeelanayo si uu ganacsigiisa ugu helo xiriir dibadeed, iyadoo la mamnuuco wax kastoo lid ku ah wax soo saarkiisa in waddanka lakeeno.
Kan kale waa Gedisley (trader) oo nooca Somalida kubadan tahay saaxibkiisa dhow waa cashuur uruuriye (tax man), waddankasta oo nidaamka cashuurtiisu xooggantahay, hay’adaha dowliguna shaqeynayaan Waaradluhu ama Geddisleydu ma jecla waayo intabdan wuxuu gadaa wax uusan soo saarin (middle man). Si macaashkiisu (profit margin) u koro waa inuu helaa badeeco jaban (xitaa haday tayo xun tahay) iyo canshuur hooseesa.
Ganacsatada Soomaaliya ugu awood weyn waa Waaradle/Geddisley (traders), iyagaa leh rugta ganacsiga una hadla danaha ganacsatada.
Sanadahan danbe siyaasiin ayeey u xiib-siibteen, oo baarlamanka federalka mug fiican ayaa uga jirta, Aqoonta ay uleeyihiin waxa ay ka ganacsanyaan waa mid aad u kooban waxayna kamid yihiin caqabadaha waddanka haysta oo loobahanyahay in laga gudbo.
Puntland, Boosaaso waxa ay leedahay madaarka ugu wanaagsan Somaliya laakiin nasiib darro ma jiraan diyarado icaalami ah oo isticmaala.
Inkastoo eeda kowaad ay leedahay maamul xumida Wasaaradda duulista Puntland hadana waxaa maqan doorkii Ganacsatada Puntland.
Waxan ogahay in diyaaradaha caalamiga ee isticmala madaarka Hargaisa ay lasoo heshiyeen ganacsato xiriir ganacsi (partnership) lasameysay, kuwaas oo fududeeyey caqabado badan oo ay shirkadahani kala kulmi lahayeen macamiisha iyo sharuucda waddanka.
Fursadaha jira oo haddii dakada labalariyo waxa kamida ah; waddanka malaha keydka Gaaska cunada (LGP tanker storage) iminka isagoo qaali ayaa waxa laga keenaa Berbara.
Sidoo kale waxaa maqan haamaha raashinka lagu keydiyo (Bulk cargo), Rashinka in lakeydiyo uu waddanka u baahan yahay waa kuwa quutul daruuriga sida Sonkorta, Bariiska, Burka iyo Saliida.
Waxaa hoos udhici lahaa sicirka cunada, wuxuuna wadanka yeelan lahaa keyd raaashin.
Boosaso marka laga tago wadama khaliijka, waxaa udhow Pakistan, Hindiya iyo Shiinaha oo runtii haddii ganacsigeeno iskuxirmo wax badan waddanka ka badali kara.
Dad badan reer Puntland baa lagushubay in Shirkadda P&O danta heshiiska dakadda Boosaaso ay tahay sidii dakada Bossaso u curyamin laheyd si ayasan ula tartamin midda Jabal Cali ee Dubai.
Inta badan dadka taas ku doodaya mahayaan xog dhaafsan waa la yiri:
“Qofkii garanaya, Jabal Cali waxay kufadhisaa dhul baaxadiisu tahay 20KM. Waxaa laga dajiyaa 220 Milyan oo konteenar sanadkii, waxa kuyaal qeybta xorta ganacsiya (free trade zone) halkaas oo ay kuyaalaan warshado waa weyn iyo kuwo yar-yar”
Nin u dhashey dalka Hindiya oo Khudaarta Hindiya ka keena ayaan weydiiyay ganacsigiisa, wuxuu igu yiri:
“Gobolka aan ka keeno khudaarta oo 28 million oo qof ay kunool yihiin waxaa ka suuq weyn Imaaraadka, sababtuna wey ka jeeb weyntahay”
Marka dhaq-dhaqaaqa dakadda hadba wuxuu kuxiran yahay dadka waddanka degan awooda waxay dhoofin karaan iyo waxa ay lasoo dagi karaan.
Tusaale kale ayaa ah Nin ka mid ah dadka wax soosaarka ku leh Koonfurta Soomaaliya ama dhulka webiyadu maraan ayaa mid lamid ah tan ninka Hindiga ii sheegay, wuxuu yiri:
“Khudaarta sida canbaha waa ay soo dhaaftaa Xamar/Muqdisho oo waxaa lageeyaa Puntland, sababtu waa macaashka lagahelaayo ayaa weyn taas oo an u gartey dadka Puntland waa kajeeb weynyihiin dadka Koonfur kunool marka boqoleey loo eego”
Puntland waa meelaha oogu fursad fiican Somaliya xag ganacsi iyo maal gashi, balse in yar oo dadkeeda ayaa isku dayday in maalkooda geliyaan wax soo saar.
Inta badan maal-gashiga aanu sameyno wuxuu ku egyahay guryo la dhiso, guriga wanagsan oo Puntland laga dhiso wuxuu ugu yaraan kubaxda 50-60,000USD, Waxaa taas dheer iyadoo qalabka waddanka laga helo uusan tayo laheyn oo gurigii iminka aad dhistaa uu sadex sano gudaheeda uu u ekanayo mid 50 sano jira.
Waxaan isbar bar dhignay qalabka dhismaha laga helo Hargaysa iyo kuwa Bossaso, kuwa Bossaso ayaa 30% tayo liita waayo ganacsatada Puntland ayaa aad udoona badeecad raqiis iyo macaash aaad ubadan.
Waxaan ku talin lahaa lacagta guryaha la degaayo ama kirada loo rabo keliya aanu galino wax soo-saar.
Waddankani waxaa soo gasha lacag aad u badan oo inta badan qurba joogta wadanka soo dirto, nasiib xumo lacagtaa inteeda badan waxay ku hartaa waddamada deriska ah sida Imaaraadka, Kenya iyo Jabuuti.
Lacagtaa waxaa lagu soo waridaa alaabo lagu farsameeyay wadamo kale, lacagtaa adag alaabaha lagu soo iibiyo waxa ka mida biyaha lacabo iyo maandoriyaha qaadka.
Author Mohamed YarePosted on 14/12/2017 Categories MAQAALO, WARARKA MAANTALeave a comment on Xalkii Loo Helay Muranka Dakadda Boosaaso iyo Mustaqbalka – (MAQAAL).
Waa Baahanahay Bakhtiga Looma Cuno – Trump, Soomaalida, Qudus iyo Amuusnaanta Dowlada Soomaaliyada Cusub.!
Todobaadkii lasoo dhaafay ayey dowlada Maraykanka soo saartay labo go’aan oo muhiim ah oo labaduba taabanaya dalka Soomaaliya, go’aanadaasi oo aysan illaa iyo hada Madaxweynaha iyo Raysalwasaaraha dowlada Soomaaliya wax jawaab ah ka bixin.
Xayiraada Socdaalka Muwaadiniinta Soomaalida.
Maxkamada Sare ee Maraykanka ayaa todobaadkan sheegtay in la dhaqan gelin doono sharcigii lagu xayirayey socdaalka dadka imaanaya Maraykanka ee kasoo jeeda lix wadan oo Islaam ah oo ay ku jirto Soomaaliya.
Go’aankan ayaa ah mid horey dood badan u keenay isla markaana lagu tilmaamay go’aan ka tarjumaya cadaawada hogaanka Maraykanka (Donald Trump) iyo xukuumadiisa u hayaan muslimiinta.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa isagu kamid ah muwaadiniinta Soomaalida ah ee heysta sharciga Maraykanka, walow uusan arrintan ka hadlin, wuxuuse Madaxweynaha todobaadkan uu amaan kala dul dhacay Maraykanka isagoo ku amaanay mashaariicda dowladaasi ka fulineyso Soomaaliya.
Dhamaan wadamada xayiraada la dul saaray muwaadiniintooda ayaa jawaabo cad ka bixiyey, iyagoo qaarkoodna sheegeen inay xayiraad taas lamid ah kusoo rogi doonaan muwaadiinta Maraykanka ee dalkooda imaanaya, halka kuwa tabarta yarna ay ugu yaraan sheegeen inay ka xun yihiin in shacabkooda qaabkaas loola dhaqmo.
Waxaa hubaal ah in dowlada Soomaaliyeed ee xiligan tahay mid daciif ah oo ku taagan taageerada caalamiga ah balse macada waxa u diidaya inay muujiso “ugu yaraan” sida ay uga xuntahay go’aankan taabanaya muwaadiniinteeda.
Dowlada iyo Xukuumada hada oo la baxday “Soomaaliyada Cusub” ayaa horey u sheegtay inay muujin doonto Qaranimadooda, balse waxaa muuqata in dowladu aysan weli ku dhiiran karin inay dhaliilsho dalalka ay taageerada ka dooneyso.
Waxaana taasi tusaale u ah go’aankii Trump ee socdaalka muwaadiniinta Soomaaliya iyo waliba kiiskii kasii horeeyey ee [Qalbi Dhagax] oo ay dowladu muwaadin Soomaaliyeed si “Sharci Daro” ah ugu gacan gelisay Dowlada Itoobiya.
Dalka Soomaaliya ayaa kamid ah dalalka Islaamka ee aan wax xiriir ah lalaheyn Israel.
Wadanka Soomaaliya ayaan weli aqoonsaneyn maamulka Israel taasi oo ah go’aanadii [dowladihii hore] ee Soomaaliya ay ku garab istaagayeen shacabka Falastiin.
Hadaba dowlada “Soomaaliyada Cusub” ayaa kamid ah dalalka Faro ku tiriska ah ee hogaamiyayashooda aan weli arrintan ka hadlin, walow ay shalay Wasaarada Arrimaha Dibada ee Federaalka qoraal kooban ku sheegtay inay arrintan ka xuntahay iyo dad shacab ah mudaharaad looga soo horjeedo go’aanka Qudus ee Trump ka dhigeen magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha iyo Raysalwasaaraha ayaa midna ka hadlin arrintan.
Qadiyadahan waa kuwo ka weyn qoraal kooban oo Wasaarada Arrimaha Dibada warbaahinta ku shaaciso, balse waa mid laga rabay hogaanka dalka inuu si toos ah uga hadlo.
Madaxweynaha iyo Raysalwasaaraha oo ah mas’ uuliyiinta ugu sareysa Dowlada Soomaaliya horey ugama xishoon walibana si deg-deg leh ayey horey tacsiyo ugu dirtay Maraykanka dilalka ka dhaca sida kii Las Vegas, balse waxaa la isweydiinayaa waxa u diiday inay ka hadlaan Qadiyada Muwaadiniintooda iyo tan magaalada barakeysan ee sadexaad ee Islaamka (Qudus)?
Waxay “Soomaalidii hore” ku maah-maahi jireen “…Waan Baahanahay Bakhtiga Looma Cuno!…”
Author Mohamed YarePosted on 09/12/2017 09/12/2017 Categories MAQAALO, WARARKA MAANTALeave a comment on Waa Baahanahay Bakhtiga Looma Cuno – Trump, Soomaalida, Qudus iyo Amuusnaanta Dowlada Soomaaliyada Cusub.!